Community Action Partnership of Ramsey & Washington Counties » Somali
Kusoo Dhawaaw Community Action Partnership Taasoo Lashaqaysa Dadka Dagan Dagmooyinka Ramsey & Washington
Maxay Tahay Community Action?
Waxaannahay hay’ad ushaqayso si faa’iido la’aan ah caawisana sanad walba ilaa 22,000 oo dadka danyarta ah kuwaasoo dagan dagmooyinka Ramsey iyo Washington. Dadkaan caawinno waxay isugu jiraan socod barad illaa dadka da’da ah. Waxaannahay hal hay’ad taasoo leh barnaamijyo badan oo dadka aan kucaawinno.
Caawinaada Tamarta (Energy Assistance)
Qoysas badan oo kusugan gobolka Minnesota waxay kubixiyaan lacagta soo gasho qayb badan koronto iyo heat. Qoysaska dakhliga yar leh, tani way ku adagtahay. Barnaamijkaan dadka wuxuu kacaawiyaa lacagta qaybtaas.
Hadii aad su’aal qabtid ama doonaysid inaad ogaato inaad uqalantid barnaamijka tamarta( Energy Assistance), fadlan soo wac 651.645.6470.
Barnaamijkan waxaa loogu talagalay qoysaska dagan dagmada Ramsey. Head Start wuxuu qaabilsanyahay waxbarashada, caafimaadka, iyo nafaqada caruurta iskuulka dhigata. Waxaan bixinaa iskuul nus maalmeed ah oo loogu talagalay caruurta da’dooda ay udhaxayso 3-5 sano. Sidoo kale, waxaan bixinnaa iskuul maalintii oo dhan ah kaas oo loogu talagalay caruurta da’dooda ay udhaxayso lix isbuuc illaa sadax sano, iyo iskuulka caruurta guriga wax lagu baro oo loogu talagalay hooyooyinka uurka leh iyo qoysaska caruurtooda ay kayartahay 3 sano. Qoysaska barnaamijkaan uqalma, waxaan kudhiira galinaynaa inay buuxiyaan arjiga.
Wixii su’aal ah oo kusaabsan barnaamijkaan, soo wac 651.603.5977. Hadii aad doonaysid in arjiga lagaa caawiyo imow qaybta hoose ee Bigelow Building oo kasoo hor jeeda Target. Waxaa lacaawiyaa dadka arbaca walba inta udhaxayso 10:00 a.m. -2:00 p.m., iyo bilwalba arbacadeeda labaad inta udhaxayso 4:00 p.m.- 7:00 p.m., 450 Syndicate Street North by the Midway Target store.
Barnaamijka iskufilnaanshaha (Self-Sufficiency)
Barnaamijkaan waxaa loogu talagalay qoysaska dakhliga yar iyo dadka raba inay gaaraan isku filnaansho dhinaca lacagta taasoo lagu gaaro waxbarasho, barashada sida lacag meel loo dhigto, iyo waliba shaqo raadin. Hadii aad doonaysid inaad iibsatid gaari, ama inaad lacag meel dhigatid, ama aad doonaysid inaad baayac mushtari noqotid, waxaa laga yaabaa barnaamijkan inuu ku anfaco.
Hadii aad su’aal qabtid ama doonaysid inaad ogaato inaad uqalantid barnaamijkan, fadlan naga soo wac 651.603.5880.
Waxaan Kashaqaynaa inaan yarayno faqriga kajira dagmooyinka Ramsey & Washington!
Naga soo wac 651.645.6445